Al-Shabaab oo khasaara weyn kala kulmay weerar ay ku qaadeen Sanguuni - Jubbaland - Halbeeg News
Al-Shabaab oo khasaara weyn kala kulmay weerar ay ku qaadeen Sanguuni – Jubbaland
Wasiirka warfaafinta Jubbaland, Cabdi Xuseen Maxamed( Midig) oo dagaalka kadib warbaahinta kula hadlay Saanguuni, 19 Janaayo 2019
SAANGUUNI(HALBEEG)- Saaka aroortii rag ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose oo ku dhawaad 50KM u jirta magaalad Kismaayo.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxaa xigay dagaal fool ka fool ah oo ay iskaga hor yimaadeen raggii weerarka soo qaaday iyo ciidamada dowladda oo iska caabinayay kaasoo muddo socday.
Wasiirka warfaafinta maamulka jubbaland Cabdi Xuseen Maxamed oo ka warbixiyay weerarka iyo khasaaraha ka dhashay ayaa sheegay in dhankooda ay guulo ka gaareen, khaasaarana ay gaarsiiyeen raggii soo weeraray.
“Halkan ayay soo weerareen dhagar qabayaasha iyaga oo laga war helay oo diyaar loo yahay ayayna imaadeen waxaana laga gubay sadex gaari oo uu ku jiro gaari weyn oo UD ah oo ay ciidamo saaranyihiin weyna carareen waana la baacsaday” ayuu yiri wasiir Cabdi.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in ciidamadii la dagaallamay kooxda weerarka soo qaadday ay wali sii baacsanayaan natiijadana ay saxaafada la wadaagi doonaan.
Wasiirka iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xilligii uu hadalkan jeedianay waxa ay ku sugnaayeen deegaanka Sanguuni ee uu saaka weerarku ka dhacay.
Al-Shabaab oo 100 qof ka afduubtay gobolka Bakool - Koonfur Galbeed
In ka badan 50 al-Shabaab ah oo lagu laayay duqeyn ka dhacday Koonfurta Soomaaliya